तियानानमेन वर्ग स्क्वायर - पृष्ठभूमि र कारणहरू
तियानानमेन स्क्वायर मस्सेर, 198 9
ताइवानमा कुन कुरा साँच्चै देखा पर्यो?
पश्चिमी संसारका अधिकतर मानिसहरू तियानानमेन स्क्वायर मस्जिदलाई यसरी सम्झन्छन्:
1) विद्यार्थीहरूले 1 990को जूनमा बीजिंग, चीनमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरोध गरे।
2) चिनियाँ सरकारले ताइवानमेन स्क्वायरमा सैनिक र टैंक पठाउँदछ।
3) विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूले क्रूर रूपमा हत्या गरेका छन्।
संक्षेपमा, यो टिआनमेन स्क्वायर वरिपरि के भयो भन्ने कुरामा सही सटीक चित्र हो, तर यो स्थिति धेरै लामो समयसम्म रह्यो र स्थायी रूपमा अराजकता थियो।
वास्तवमा प्रदर्शन 1988 को अप्रिलमा शुरु भएको थियो, जसको पूर्व कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव हू यहाङ्गङको विलापको सार्वजनिक प्रदर्शन।
उच्च सरकारी अधिकारीको अंतिम संस्कार जस्तो देखिन्छ कि लोकतान्त्रिक प्रदर्शन र अराजकताको लागी कुनै सम्भावना छैन। यद्यपि, समयको आधारमा तियानानमेन स्क्वायर विरोध र नरसंहार दुई महिना भन्दा कम भए पछि, 250 देखि 7,000 मान्छे मरे।
बीजिंगमा वसन्तको साँच्चै के भयो?
1980 को दशकमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जान्थे कि शास्त्रीय माओवादीवाद असफल भएको थियो। छिटो औद्योगिककरणको माओ जेडोंगको नीति र भूमिको सामूहिककरण, " अग्लो ठूलो पलायन ," भूकम्पबाट दसौं मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो।
त्यसपछि देश आतंकवाद र सांस्कृतिक क्रांतिको अराजकता (1966-76) मा आर्यो, हिंसा र विनाशको आचरण जो किशोरीले देखेको छ रेड गार्ड्सले अपमानित, शंका, हत्या र कहिलेकाहीँ पनि सैकड़ों हजारौं वा लाखौं साथीहरू पनि रद्द गर्न सक्दैन।
अपरिवर्तनीय सांस्कृतिक हेराइलोम नष्ट भयो; परम्परागत चिनियाँ कला र धर्म सबैले बुझाए।
चीनको नेतृत्वले उनीहरूलाई सत्तामा रहन परिवर्तनहरू परिवर्तन गर्न थालेको थियो, तर उनीहरूले कस्तो सुधार गर्नुपर्छ? कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले ती ठूला सुधारहरूको पक्षमा विभाजित गरेका थिए, जसमा पूंजीवादी आर्थिक नीतिहरू र चिनियाँ नागरिकोंका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्र स्वतन्त्रता सहित, उनीहरूले कमाएको अर्थव्यवस्थासँग सावधान रहन मन पराए र जनसंख्याको सख्त नियन्त्रण जारी राखे।
त्यसोभए, नेतृत्वको साथमा कुन दिशाको बारेमा जानकारी छैन, चीनले मानिसलाई सत्तावादी राज्यको भय र सुधारको लागि बोल्ने इच्छाको बीचमा कुनै मानिसको जमीनमा घटेको छ। अघिल्लो दुई दशकका सरकारी-उत्प्रेरित त्रासदीहरूले तिनीहरूलाई परिवर्तनको लागि भोकाउन छोडेनन् तर बेइजिङको नेतृत्वको लोहेको मुट्ठीले विपक्षीहरूलाई पराजित गर्न सधैं तयार थियो। चीनका मानिसहरूले कुन हावा झिकेर हेर्छन् प्रतीक्षा गर्न पर्खथे।
ह्वा याहाङ्गका लागि स्पार्क मेमोरियल
ह्वाओबंग एक सुधारवादी थिए, जसले 1980 देखि 1986 सम्म कम्युनिस्ट पार्टीको महाप्रबन्धकको रूपमा सेवा गरे। उनले सांस्कृतिक क्रांतिको समयमा, तिब्बतको लागि अधिक स्वायत्तता, जापानसँगको सम्बन्ध, र सामाजिक र आर्थिक सुधारको लागि सताउनेहरूको पुनर्निर्माण गरे। नतिजाको रूपमा, उनले 1987 को जनवरीमा कडालिनरबाट कार्यालयबाट फर्काइन् र उनीहरूले कथित बोर्जेज विचारहरूका लागि अपमानजनक जनता "आत्म-आलोचना" प्रस्ताव गरे।
हू विरुद्धको आरोपमा उनीहरूको एक आरोप थियो कि उनीहरूले 1986 को अन्तमा ठूलो विद्यार्थीहरूको विरोधाभास गरे (प्रोत्साहन दिएका थिए)। महासचिवको रूपमा, तिनले यस्तो विरोध प्रदर्शन गर्न इन्कार गरे, विश्वास गरे कि बुद्धिमानीहरूले विरोध गरेपछि कम्युनिस्ट द्वारा बर्बर हुनुपर्छ सरकार।
हाउआबान्गले आफ्नो अनुहार र अपमान पछि लामो समयसम्म मृत्युदण्डको सामना गरे, अप्रिल 15, 1988 मा।
आधिकारिक मिडियाले हूको मृत्युको छोटो उल्लेखलाई उल्लेख गरिसकेको छ, र पहिलो सरकारले उनलाई राज्यको अंतिम संस्कार दिने योजना छैन। प्रतिक्रियामा, बेइजिङका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले तियानानमेन स्क्वायरमा बसाएपछि स्वीकार्य, सरकार-अनुमोदित नाराहरू चल्दै, र हूको प्रतिष्ठाको पुनर्निर्माणको लागि कल गर्दै।
यस दबाबको कारणले गर्दा सरकारले हाउ एक राज्यको अंतिम संस्कारलाई सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो। तथापि, 19अप्रिलका सरकारी अधिकारीहरूले छात्र माग्ने एक प्रतिनिधिमन्त्री प्राप्त गर्न इन्कार गरे, जसले धैर्यपूर्वक जन हतियारमा तीन दिनसम्म कसैलाई बोल्न खोजेको थियो। यो सरकारको पहिलो ठूलो गल्ती साबित हुनेछ।
हूको स्मारक सेवालाई 22 अप्रिलमा आयोजित गरिएको थियो र ठूलो विद्यार्थी प्रदर्शनमा 100,000 व्यक्तिले स्वागत गर्नुभएको थियो।
सरकार भित्रका कठिनाइहरू विरोधको बारेमा अत्यन्तै असहज थिए, तर महासचिव झा झाआनले विश्वास गरे कि विद्यार्थीहरूले अन्तिम संस्कार समारोहमा एकपटक पराजित गरे। झाहु यति धेरै विश्वस्त थिए कि उनले उत्तर कोरियालाई एक बैठक बैठकको लागि एक हप्ता लामो भ्रमण गरे।
तथापि, विद्यार्थीहरू दुर्व्यवहार गरेका थिए कि सरकारले उनीहरूको अपील प्राप्त गर्न अस्वीकार गरे र उनीहरूले उनीहरूको विरोधमा न्युयोर्क प्रतिक्रियाको साथ मनाए। सबै पछि, पार्टी तिनीहरूलाई यस्तो टाढा टाढाबाट हटाइयो, र ह्वा Yaobang को लागि एक उचित अलौकिक लागि आफ्नो माग मा पनि भोगेको थियो। तिनीहरूले विरोध गरिरहे, र उनीहरूका नाराहरू अनुमोदन गरिएका पाठहरू अझ थप भयो।
घटना बाहिर नियन्त्रण स्पिन गर्न सुरु
देश भन्दा बाहिर झाओ जियांगसँग, लि पेन्गले सरकारको कडाईरहनेले पार्टी पार्टीका शक्तिशाली नेता, डन ज़ियाओपिंगको कानलाई झुन्ड्याउने मौका पाए। डन एक सुधारकर्ता आफैको रूपमा, बजार सुधार र समर्थनका अधिक खुल्लापनको रूपमा चिनिन्थ्यो, तर कठिनाइहरूले छात्रहरू द्वारा खतरा खारेज गरे। ली पेन्गले ड्यानलाई पनि बताए कि प्रदर्शनकारीहरू व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई शत्रुवादी थिए, र उनीहरूको सतावट र कम्युनिस्ट सरकारको पतनको लागि बोलाउँदै थिए। (यो आरोप निर्माण भएको थियो।)
स्पष्ट रूपमा चिन्तित, ड्यान जियाओपिंगले 26 अप्रिल को जन दैनिकको प्रकाशनमा सम्पादकीयमा प्रदर्शन प्रदर्शन गरे। उनीहरूले "साना अल्पसंख्यक" द्वारा विरोध प्रदर्शन dongluan (अर्थ "अशांति" वा "दंगा") भनिन्छ। यी अत्यधिक भावनात्मक नियमहरू सांस्कृतिक क्रांतिको क्रूरतासँग सम्बन्धित थिए।
विद्यार्थीहरूको श्रोतालाई टाँस्न भन्दा सट्टा, डनको सम्पादकीयले यसलाई अगाडी बढायो। सरकारले यसको दोस्रो गल्ती गल्ती गर्यो।
अप्रत्याशित रूप देखि, विद्यार्थीहरूले महसुस गरे कि उनि डग्लुआन लेबल गरे यदि उनीहरुले अभियोग लगाइने डरले अन्त्य गर्न सक्दैनन्। कतिपय 50,000 उनीहरूले यस मामलालाई थिचेर जारी राखे कि देशभक्तिले तिनीहरूलाई उत्प्रेरित गरेनन्। जबसम्म त्यस विशेषतालाई फिर्ता लिइयो तबसम्म विद्यार्थीले तियानानमेन स्क्वायर छोड्न सक्दैनन्।
तर सरकार पनि संपादकीय द्वारा फंसिएको थियो। डेंगियाओपिंगले आफ्नो प्रतिष्ठा ठिक्यो, र सरकारको, फिर्ता गर्न विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता गर्न। कसले पहिलो पटक पल्टिन्छ?
Showdown, Zha Ziyang vs। ली पेंग
महासचिव झा झाले उत्तर कोरियाबाट फिर्ता लिने क्रममा संकटबाट ट्रांसफर गर्न खोजे। उनले अझै पनि महसुस गरे कि छात्रहरू सरकारलाई कुनै वास्तविक खतरा थिएनन्, तथापि, र स्थितिलाई दुरुपयोग गर्न खोज्ने, ड्यान जियोपिंगलाई भ्रामक सम्पादकीय पुनरावेदन गर्न आग्रह गर्दै।
तर प्यान पेंग, तथापि, तर्क गरे कि अब फिर्ता नेतृत्व को पार्टी नेतृत्व द्वारा कमजोरी को एक घातक शो हुनेछ।
त्यसोभए, अन्य शहरका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा सामेल हुन बीजिंगमा खसे। सरकारको लागि असीमित रूपमा अन्य समूहहरू पनि सामेल छन्: गृहिणीहरू, कर्मचारीहरू, डाक्टरहरू, र चीनको नौसेनाबाट पनि नाविकहरू! अन्य शहरहरूमा शंकास्पद पनि फैलियो - शंघाई, उरुमुची, जियान, टियांजिन ... लगभग 250
4 मई सम्म, बेइजिङमा प्रदर्शनकारीहरूको संख्या 100,000 फेरि फेरियो। 13 मेगामा विद्यार्थीले उनीहरूको अर्को चर्को कदम उठाए।
तिनीहरूले अप्रिल 26 सम्पादकीयलाई फिर्ता लिन सरकारको लक्ष्यको साथ एक भोटे हड़तालको घोषणा गरे।
हजुर हड़तालमा हजारौं विद्यार्थीहरूले भाग लिइन्, जसलाई सामान्य जनसंख्याको बीचमा व्यापक रूपमा सहानुभूति व्यक्त गरिएको थियो।
सरकार निम्न दिन आकस्मिक स्थायी समितिको बैठकमा भेटियो। झाले आफ्ना सँगी नेताहरूलाई विद्यार्थीहरूको मागमा स्वीकार्न र सम्पादकीयलाई हटाउन आग्रह गरे। ली पेन्गले फटाफटाउन आग्रह गरे।
स्थायी समितिलाई मर्मत गरिएको थियो, त्यसैले डान्स जियोपिंगलाई निर्णय गरियो। अर्को बिहान, उहाँले घोषणा गर्नुभयो कि उहाँले मार्शल कानून अन्तर्गत बीजिंग राखिरहनुभएको थियो। झाह निकालिएको थियो र घरको गिरफ्तारीमा राखियो; हार्ड-लाइनर जियांग जेमिनले उनलाई जनरल सचिवको रूपमा सफल बनायो; र अग्नि-ब्रान्ड लि पेन्ग बीजिंगमा सेनाको नियन्त्रणमा राखिएको थियो।
विद्रोह को बीच मा, सोवियत प्रिमियर र सोसाइटी रिसेप्टर मेखेल गोरबचेवले 16 मई को झा को साथ चीन को लागि वार्ता गरे।
गोरबचेवको उपस्थितीको कारण, विदेशी पत्रकार र फोटोग्राफरहरूको ठूलो पक्षले चिनियाँ राजधानीको अवस्था पनि घट्यो। उनीहरूको रिपोर्टहरूले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता सुन्नु र संयन्त्रको लागि कल, हङकङ, ताइवान र पश्चिमी राष्ट्रहरूमा पूर्व-राष्ट्रपश्चिमी चिनियाँ समुदायहरूमा सहानुभूतिको विरोध गर्दछ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चीन कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा अझ बढी दबाब दिए।
बिहान 191 मा बिहानै साँझमा झाङ्गो टायनानमेन स्क्वायरमा असाधारण उपस्थिति बनाइयो। बुल्होर्नको माध्यमबाट बोल्दै उनीहरूले प्रदर्शनकारकलाई बताए: "विद्यार्थीहरू, हामी ढिलो भए। हामी क्षमाप्रार्थी छौं। तपाईं हाम्रो बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, हामी आलोचना गर्छौं, यो सबै आवश्यक छ। म यहाँ आउनुको कारण तपाईं हामीलाई माफ गर्न चाहनुहुन्न। सबै म भन्न चाहन्छु कि विद्यार्थीहरू धेरै कमजोर हुँदैछन्, यो सातौं दिन हो जब तपाईं भोक हड्तालमा जानु भएको छ, तपाई यो जारी राख्न सक्नुहुन्न ... तपाईं अझै पनि जवान हुनुहुन्छ, आउन अझै धेरै दिनहरू छन् स्वस्थ रहनु पर्छ, र दिन हेर्नुहोस् जब चीन चार आधुनिकीकरणहरू पूरा गर्दछ। तपाईं हामीलाई मनपर्दैन, हामी पहिले नै पुरानो हो, यसले अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण छैन। " यो अन्तिम पटक उहाँ जनतामा कहिल्यै देख्नुभएको थियो।
सायद झाको अपीलको प्रतिक्रियामा, मईको अन्तिम हप्ताको समयमा तनाव बिग्रियो र बेइजिङका विद्यार्थी विद्यार्थीहरू धेरैले विरोधको कुरा बढे र वर्ग छोडे। तथापि, प्रांतहरूबाट सुदृढीकरण शहरमा पसेको छ। हार्ड-लाइन विद्यार्थी नेताहरूले जुन 20 जुनसम्म जारी राख्न आग्रह गरे भने नेशनल पीपुल्स कांग्रेसको बैठक सम्पन्न भएको थियो।
मई 30 मा, विद्यार्थीहरुले "ट्युनमनमेन स्क्वायर" को "डेमोक्रेसी देवी दैली" भनिने ठूलो मूर्तिकला स्थापना गरे। प्रतिमा लिबर्टी पछि मोडेल, यो विरोधको स्थायी प्रतीक हो।
लामो समयदेखि विरोधको लागि कल सुन्नु,2जूनमा कम्युनिस्ट पार्टी एल्डरहरूले राजनीतिब्रोरो स्थायी समितिको बाँकी सदस्यहरूसँग भेट्टाए। तिनीहरूले सेना द्वारा तियानानमेन स्क्वायर भन्दा बाहिरका प्रदर्शनकर्ताहरुलाई हटाउन मानिसहरूको लिबरेशन आर्मी (पीएलए) लाई ल्याउन सहमत भए।
तियानानमेन स्क्वायर मस्सेर
जून 3, 1919को बिहान, जनक लिबरेशन आर्मीको 27 औं र 28 औं डिभिजनहरू पैदल र ट्यांकमा तियानानमेन स्क्वायरमा गएर प्रदर्शनकारीहरूलाई पराजित गर्न गियर ग्याँस फाल्ने। उनीहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हान्न आदेश दिएका थिए; वास्तवमा, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले आगो लगाउँदैनन्।
नेतृत्वले यी विभाजनहरू चयन गर्यो किनभने तिनीहरू टाढाका प्रान्तहरूबाट थिए। स्थानीय पीएलए सैनिकों को विरोधाभास को संभावित समर्थकों को रूप मा अविश्वसनीय मानिन्छ।
न केवल विद्यार्थी प्रदर्शनकर्ताहरू तर हजारौँ कार्यकर्ता र बीजिंगको साधारण नागरिक पनि सेनालाई पछाडी पार्न एक साथ सामेल भए। ब्रेकरेडहरू सिर्जना गर्न जलाएर बसहरू प्रयोग गरे, सैनिकहरूमा चट्टानहरू र ईटाहरू फेंकियो, र उनीहरूको ट्याङ्कभित्र केही टैंकका कामदारहरू जलाइदिए। यसरी, तियानानमेन स्क्वायर दुर्घटनाको पहिलो हतियार वास्तवमा सैनिकहरू थिए।
विद्यार्थी नेतृत्वको नेतृत्वमा अब एक कठिन निर्णयको सामना गर्यो। के उनीहरूले स्क्वायर खाली गर्नु अघि अर्को रगत बहाउन सकिन्छ वा तिनीहरूको जमीन समात्न सक्छ? अन्तमा, तिनीहरूमध्ये धेरैजना बाँकी रहन्थे।
त्यो राति, लगभग 10:30 बजे, पीएलए टियांजिनमेन्टमा राइफलहरू, बेनेनेटहरूसँग निश्चित भए। ट्यांकले भित्तामा गोली हानेर सडकमा उक्ल्यो।
विद्यार्थीहरूले चिन्ता गरे "तिमीहरू किन मार्छौ?" सैनिकों लाई, धेरै मध्ये प्रदर्शनकर्ताहरु को जस्तै एक उमेर को बारे मा थिए। रिक्शा चालक र साइकलिस्टलिस्टले मेलेबाट घटेको, घाइतेलाई बचाउँछन् र अस्पतालमा ल्याइदिन्छ। अराजकतामा, धेरै गैर-प्रदर्शनकारीहरू पनि मारिए।
लोकप्रिय विश्वासको बिरुद्ध, हिंसाको थोक प्रायः टायननमेन स्क्वायर वरिपरि स्क्वायरमा सहरमा पुग्यो।
जून3को रात र जुन4को शुरुआती घण्टामा, सेनाले हरायो, बैटननेट र गोली हारेका थिए। ट्यांकले सीधा टाढै घुमायो, मान्छे र साइकलहरू घुम्न थाले।6जून, 1969मा, टियानानमेन स्क्वायर वरिपरि सडक सफा गरियो।
"टैंक मैन" वा "अज्ञात विद्रोह"
4 जूनको अवधिमा यो शहर झन्डै घटेको थियो, केवल कहिलेकाहीँ तातो आगो झल्किन्छ। लापता विद्यार्थीहरूको आमाबाबुले उनीहरूलाई आफ्ना छोरा र छोरीहरू खोज्ने विरोध क्षेत्रलाई धक्का दिए, केवल उनलाई चेतावनी दिएर पछि तिनीहरू सैनिकहरूबाट भागेका थिए। डाक्टरहरू र एम्बुलेंस चालकहरू जो घाइतेहरूलाई मद्दत गर्न क्षेत्र प्रवेश गर्न प्रयास गरे पनि PLA द्वारा ठंड रगतमा गोली हानिएको थियो।
बीजिंग जुन5जुन बिहानको बिहानको अन्त्य भयो। तथापि, विदेशी पत्रकारहरू र फोटोग्राफरहरू, जेपी विडेन्डरका एपी सहित, ट्यांकको एक स्तम्भको रूपमा उनीहरूको होटेल बाल्कनीजबाट हेर्ने चान्गान एवेन्यू (एभरेष्ट अफ एवेन्यू) अद्भुत कुरा भयो।
एक सेतो शर्ट र कालो प्यान्टमा एक जवान मान्छे, प्रत्येक हातमा किनमेलको थलो, सडकमा पसेको र ट्यांकहरू रोक्न। नेतृत्वको टैंकले आफ्नो वरिपरि घुमाउन खोजे, तर उनले फेरि यसको पछि लागे।
सबैलाई डरलाग्दो आकर्षणमा हेर्ने डरले टैंक चालकले धैर्य गुमाउनेछ र मानिसलाई चलाउनेछ। एकै ठाउँमा, मानिस पनि टैंकमा चढे र भित्रका सैनिकहरूसँग बोल्दै, कथित रूपमा उनीहरूलाई सोध्छन्, "तिमी किन यहाँ हो? तपाईले कुनै पनि तर दु: खको कारण बनाउनुभएको छैन।"
यस अचम्मको नृत्यको धेरै मिनेट पछि, दुई जना पुरुष टैंक म्यान पुग्छन् र तिनलाई हल्लाए। उहाँको भाग्य अज्ञात छ।
यद्यपि, अझै पनि उनीहरूको साहसी कार्यका तस्वीरहरू र भिडियो पश्चिमी प्रेसका सदस्यहरूले नजिकैको कब्जामा लिए र संसारलाई हेर्नका लागी बिग्रेको थियो। चौडाई र धेरै अन्य फोटोग्राफरहरूले आफ्नो सुरक्षा शौचालयको ट्यांकमा फिल्म लुकाए, चिनियाँ सुरक्षा बलहरूले खोजीबाट बचाउँछन्।
विडम्बनात्मक रूपमा, टैंक म्यानको अभिनयको कथा र तस्विरको पूर्वी पूर्वी क्षेत्रमा हजारौं मील टाढाको सबैभन्दा तत्काल प्रभाव थियो। तिनको साहसी उदाहरणद्वारा भाग लिनुभयो, सोभियत ब्लकका मानिसहरू सडकमा खसे। सन् 1 990मा बाल्टिक राज्यहरूसँग सुरु भयो, सोभियत साम्राज्यको गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतान्त्रिक गण यूएसएसआरआर ध्वस्त भयो।
तियानानमेन स्क्वायर मास्सेरमा कति जना मानिसहरु मरेका छैनन्। आधिकारिक चिनियाँ सरकारको आंकडा 241 छ, तर यो लगभग निश्चित रूपमा एक ठुलो अङ्क हो। सैनिकहरू, प्रदर्शनकारीहरू र नागरिकहरूको बीचमा, यो जस्तो देखिन्छ कि 800 देखि 4000 मान्छे मारिए पनि। चिनियाँ रेड क्रसले शुरुआती स्थानीय अस्पतालको संख्यामा 2,600 मा टोल राख्यो, तर त्यसोभए तीव्रताले तीव्र सरकारको दबाबमा यो कथन फिर्ता लिनुभयो।
केही साक्षीहरूले पनि बताए कि PLA धेरै निकायहरू टाढा थिए; उनी अस्पताल अस्पतालमा समावेश भएनन्।
तियानानमेन 1 99 8 को बादमा
तियानानमेन स्क्वायर दुर्घटनाबाट बाँचेका प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न भागहरु भेट्टाए। केहि, खासकर विद्यार्थी नेताहरु लाई अपेक्षाकृत हल्का जेल सर्तहरु (10 वर्ष भन्दा कम) दिएका थिए। धेरैजना प्रोफेसरहरू र अन्य व्यवसायीहरू जोसिएका थिए, केवल ब्ल्याकलिस्ट गरिएको थियो, काम खोज्न असमर्थ। श्रमिक र प्राविधिक जनहरूको ठूलो संख्या कार्यान्वयन गरियो। सही आंकडाहरू, सामान्य रूपमा, अज्ञात छन्।
चिनियाँ पत्रकारहरूले रिपोर्टरका प्रतिवेदन सहानुभूति प्रकाशित गरे पनि आफूलाई बर्खास्त र बेरोजगार। धेरै भन्दा धेरै प्रसिद्धहरू बहु-वर्षको जेलको सर्तहरूमा सजाय गरिएको थियो।
चीनी सरकारको लागि, जून 4, 1988 मा जलविद्युत पल थियो। चीनको कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका सुधारकर्ताहरू शक्तिबाट हटाइएका थिए र समारोहका लागि पुनःस्थापित भए। पूर्व प्रिमियर झाको जियाङ्ग कहिल्यै पुनर्स्थापित गरिंदैन र उनको अन्तिम 15 वर्ष घरको गिरफ्तारीमा बिताईयो। शंघाईको महापौर, जियांग जेमिन, जसले त्यस शहरमा विरोधको अन्त्य गर्न चाँडै सारियो, झालाई पार्टी पार्टीका महान सचिवको रूपमा बदले।
त्यस समयमा देखि, चीन मा राजनीतिक आलोचना बेहद मौन भएको छ। सरकार र अधिकांश नागरिकहरू समान रूपमा राजनीतिक सुधारको तुलनामा आर्थिक सुधार र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित छन्। किनकि तियानानमेन स्क्वायर मस्जिद एक नुहाउने विषय हो, 25 भन्दा कम उमेरको चिनियाँ चिनियाँ यो कहिल्यै सुनेको छैन। चीनमा "जुन4घटना" उल्लेख गरिएको वेबसाइटहरू ब्लक गरिएका छन्।
दशकौं पछि, चीन र चीन सरकारले यस क्षणिक र दुःखलाग्दो घटनासँग व्यवहार गरेको छैन। तिब्बती सेना स्क्वायर मास्सेक फेस्टर्सको मेमोरी रोजगारीको जीवनको सतहमा त्यस्ता अभिभावकहरूलाई सम्झनका लागि पर्याप्त छन्। कुनै दिन, चिनियाँ सरकारले यो टुक्राको इतिहासको सामना गर्नु पर्छ।
Tiananmen स्क्वायर मास्सेर मा एक धेरै शक्तिशाली र परेशान लेने को लागि, पीबीएस फ्रंटलाइन विशेष "द टैंक मैन," अनलाइन हेर्न को लागी हेर्नुहोस।
> रोजर वी। डे डिफेस, Ning लुओ, येन-बू वू। चीनी डेमोक्रेसी र 1988 को संकट: चीनी र अमेरिकी प्रतिबिंब , (न्यूयर्क: एसयूवाईई प्रेस, 1 99 3)
> पीबीएस, "फ्रंटलाइन: द टंक मैन," 11 अप्रिल, 2006।
> अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग बुक। "टियानानमेन स्क्वायर, 198 9: डिस्लाइस्टेड ईतिहास," जर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालयद्वारा पोस्ट गरिएको।
> जांग लिआंग। तियानानमेन पेपर्स: उनीहरूको आफ्नै मान्छे विरुद्ध बल प्रयोग गर्न चीन नेतृत्वको निर्णय - उनीहरूको आफ्नै शब्दहरूमा , "एड एन्ड्रयू जे नथन र पेरी लिंक, (न्यू यर्क: पब्लिक अफिस, 2001)
यर्मिया ओहोोनोवन रोजसा
फारसी युद्ध 492-449को समय
हनिबाल, रोमको सबैभन्दा ठूलो दुश्मनको प्रोफाइल
हान जुन्ताओको विरासत
किन चर्चिलले 1945 को चुनावलाई हरायो
रयल परिवारमा को को हुन्
फिलीपींस को एमिलियो जेकोटो
स्टालिनको मृत्यु: उहाँले आफ्ना कार्यहरूको नतिजाबाट बचाउनुभएन
बाइट र बिट
ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय प्रवेश
1949को राष्ट्रपति ट्रमन को फेयरल सौदा को बारे मा
कलेजबाट निकासीको लागि उपयोगी सुझाव
एश बुधबार कहिले हुन्छ?
कसरी सेलब्याट डक गर्नुहोस्
11 'The Scarlet Letter' बाट अविस्मरणीय उद्धरणहरू
उपनाम पटेलको उत्पत्ति के हो?
तपाईं एसट लिनु अघि4के गर्नु पर्छ
शीर्ष विज्ञान मेला परियोजना पुस्तकहरू
झूटा Cognates: 'विवादास्पद' र 'वास्तवमा'
भोल्वो चीन ओपन
'द ऑफिस' सीजन9प्रकरण गाइड
सुजानजन स्टेभन्स - कलाकार प्रोफाइल
फ्रान्सेली क्रांति टाइमलाइन:6क्रांति को चरणहरु
गलीलको क्षेत्रको प्रोफाइल - इतिहास, भूगोल, धर्म
समग्र भर्ती के हो?
माउन्ट सेन्ट विन्सेंट प्रवेश
के तपाईंले वर्षामा स्केटबोर्ड गर्नुपर्छ?
बोतल गोर (लेगेरिया siceraria) - घरेलूकरण इतिहास
बुद्ध गांधारा को खोया वर्ल्ड
स्पेनिस टुडे: लर्निंग र स्पिनिश प्रयोग गर्ने सुझाव
अप्ठेरो तनावमा कसरी विजयी हुन
480 ईसा पूर्वमा थर्मोपीलाले युद्ध
सामान्य सम्पादन र संरचनामा प्रूफ्रेडिङ मार्कहरू
किन गर्भपात - गर्भपात किन छनौट?
नर्म थैगर्ड: अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो एक प्रमोदवन बन्यो